Sarin'ny vorona vita amin'ny loko rano avy amin'i Scherft | Famoronana an-tserasera
Sarina vorona mpanaingo volo tena izy an'i Johan Scherft
Ny taratasy dia iray amin'ireo fitaovana izay zakan'ny mpanakanto maro hitadiavana fampitaovana tsara ho an'ny fanehoana zavakanto. Avy amin'ireo andalana ireo zarainay matetika izany milaza ny fitiavany taratasy izay mitarika azy ireo amin'ny vokatra tena mahavariana.
Iray amin'ireo mpanakanto afaka manahirana ny famoronana anao ary ny fampiasana betsaka ataon'izy ireo amin'ity fitaovana ity dia Johan Scherft. Ny ampahany amin'ny androny dia natokana amin'ny famoronana sary vorona volo vita amin'ny rano tena izy. Ireo modely azonao jerena ato amin'ity lahatsoratra ity dia mitaky herinandro maro ho an'ny fahatsapan'izy ireo izay ny fizotrany dia ny endriny ary inona no manome azy ireo ny loko miaraka amin'ny loko rano.
Johan Scherft dia manana fitiavam-borona lehibe misolo tena amin'ny karazana taratasy sy loko rano mihoatra ny 20 amin'ny karazana andian-dahatsoratra izay manana teknika lehibe ary mahatratra saika hyper-realism, na dia mitoetra eo amin'ny fetrany fotsiny aza ny manome ny fomba fahitany azy manokana.
Azontsika atao ny mahita ny goldfinch, hummingbird, birdpecker, vorondolo na kingfisher miaraka amin'ireo fialam-boly hafa ananan'ireo zavamananaina manokana ireo. Ny marina dia misy amin'izy ireo mampita ny fahatsapana fa eo alohan'ny tena izy izay toa hanamboatra iray amin'ireo hetsika haingana sy voajanahary handositra izy.
Un asa tena tsara an'ity mpanakanto ity izay anehoany teknika tena tsara amin'ny loko rano ary amin'ny fanapahana sahaza ny tarehimarika sy ny endrika, dia manome ireo famaranana tsirairay hitanao amin'ny farany ireo ny tranonkalanao manokana na in Etsy. Izy io dia ao aoriana izay ahafahanao mividy zana-ketsa amin'ny vidiny mirary toa ny 8,47 amin'ny tranga sasany toy ny goldfinch, na iray na iray € eo amin'ny 150 € eo ho eo.
Scherft dia mampiseho ny fitiavany ireo karazana rehetra ireo hitondra antsika rehetra tarehimarika amin'ny fitsaboana tsara tarehy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sarina vorona mpanaingo volo tena izy an'i Johan Scherft
+50 Efatra PSD maimaim-poana